Omatilasi "sarma" - Value ukuphila
Umuntu ngoba ukuphila okuvamile kudinga izinto eziningana: ukudla okunempilo, amanzi ehlanzekile emoyeni, ukuphumula okuhle. Futhi uma endaweni yokuqala kucacile konke eholidini Kufanele uyeke kabanzi. Lokhu kusho hhayi iholide kuphela wachitha ogwini ehlobo noma ski ebusika. Kumayelana izinga ubuthongo, ezijulile futhi kuqabula.
Izinto zenani elikhulu zomuntu ukukhetha
Okudingayo? Calm, ekhululekile, ethule futhi embhedeni, hhayi esithambile futhi, ngokulinganisela elukhuni, esakhiwe ngezinto zemvelo, izingubo zokulala enhle. Futhi ehamba phambili indima umantilasi. Namuhla, akukho nkinga ungakwazi ukuthenga umkhiqizo brand "Ascona", "Dormeo", "Ikea" nezinye abakhiqizi owaziwa. Inthanethi-izitolo kanye evamile izikhungo bezentengiselwano edolobheni zilungele uhlinzeke nganoma imiphi imikhiqizo enjalo lapho izinga akungatshazwa. Kodwa abasakwazi eqolo, ngakho-ke akuwona wonke umuntu angakwazi ukukhokhela ukwenza ukuthenga ezinjalo. Into - omatilasi "sarma", okuyinto okubonisa izinga phezulu futhi ngemali ephansi. Khona-ke kungani akhokhe imali ethé xaxa?
"Sarma" - izinga, sibe abantu abanokwethenjelwa
Factory semibhede "sarma" kuba ezijwayele umthengi isikhathi eside. Kule minyaka engu-nesishiyagalombili iminyaka, inkampani enakekela iphupho yomuntu ephile kahle ukukhulula imikhiqizo esezingeni lomhlaba. Phakathi nalesi sikhathi wafumana into eyigugu kakhulu - ukuzethemba abantu njalo ekuseni wake up waphumula, bejabule, nge ajabule. abathengi Geography ngempela omatilasi emangalisayo "sarma" kungatholakala emakhaya abantu abahlala inhlokodolobha, eSiberia, eMpumalanga Ekude, Kazakhstan futhi Mongolia. Shono imikhiqizo imboni ayatholakala nemibukiso eminingi ehlonishwayo futhi ukhishwa imiklomelo yabo. Kodwa eqolo wabo ochwepheshe "sarma" - ukunqoba emncintiswaneni onesihloko esithi "izimpahla Kuhle namasevisi ezintaba zase-Eurasia - Gemma", futhi sibonga amakhasimende eminingi.
Omatilasi "sarma" - iyona esemqoka kodwa hhayi umkhiqizo imboni kuphela. Kubuye kwenze sibe ifenisha upholstered, ekhishini ifenisha, embhedeni ingaphakathi. Ngo parallel, inkampani lisebenzisa lezi izingxenye: chipboard laminated, ifenisha Indwangu, ifenisha, igwebu, MDF mbumbulu, countertops nokunye. Collection ngaphansi kwegama lomkhiqizo "sarma" njalo olusha futhi abasebenzi acabangele yemfashini hhayi kuphela zakamuva, kodwa futhi izifiso amakhasimende.
Kuyaphawuleka ukuthi imikhiqizo imboni ayakwazi ukujabulisa ngisho umuntu fastidious kunazo. Akukhona nje okuhle izinga-Intengo isilinganiso, kodwa futhi yesiqinisekiso kwabakhiqizi, service lihle, kwamahhala.
Ukuqoqwa omatilasi kusukela "sarma" elikhulu ngempela. Yonke imikhiqizo kungenziwa ihlukaniswe amaqembu amaningana (uchungechunge):
Hit Series - okungcono ethengisa omatilasi abeke ndawonye nqampuna umhlabeleli (Ukusebenziseka, ukuthembeka, induduzo). Akuphikwa zithengwa ubuthaphuthaphu, hits ngempela.
Monarch - imikhiqizo izinga, ephelele ezinoqwembe kusukela CoolMax Indwangu ngu DuPont.
omatilasi 'Aero' anemisila yesimanje kanye eliphezulu yamathebhu, ngakho kukhona ekahle ukuze isetshenziswe amahhotela, izindawo zokulala, amakamu, ukuzilibazisa izikhungo nokunye.
Iqembu "USonia", eyenzelwe izingane bobudala obungefani.
Uchungechunge "Culver" kuhlanganisa omatilasi, eyenziwe zobuchwepheshe izinto futhi fillers zemvelo.
Iqembu Maestro - singamakhulu ayisithupha kuphela izinhlobo imikhiqizo, okuyinto sebenzisa yamathebhu kakhukhunathi fibre, struttofaybera latex.
Uchungechunge springless omatilasi ukuthi musa buthelela zikagesi.
Imodeli ethandwa kakhulu
I kumatilasi ethandwa kakhulu "Coleus" ( "sarma"), obhekisela "Culver" iqembu. Lo mkhiqizo ine ubulukhuni isilinganiso okuyinto flooring Imicu yotshani lukakhukhunathi has kuyaqina esihle nenduduzo anda. Onjiniyela ezihlanganiswe elikhulu isilinganiso block iziphethu ezimele nezendlalelo ezithambile. Izingxenye ezilandelayo zayo: imbobo polyurethane foam entwasahlobo block TFK, kakhukhunathi fibre, Indwangu nonwoven nekhava cotton nge zokwenziwa ukupheda futhi polyurethane foamed.
omatilasi kungemalengiso ezishibhile "sarma" Izibuyekezo kukhona nomdlandla kakhulu. abathengi abaningi bayajabula ne imodeli "Coleus". Bakhomba ukuthi ngentengo efanayo izimbangi athengisa kakhulu imikhiqizo yekhwalithi ephansi. Okuningi noma okuncane izimpahla evamile kusuka kwamanye abakhiqizi akuyona ruble esingaphansi 28 eziyinkulungwane, futhi okuhle inkumbulo Foam omatilasi kusukela "sarma" kubiza ruble ecishe ibe yizinkulungwane 20-32, kuye ngohlobo kanye nosayizi. Lesi "simangaliso we umkhakha ifenisha" angathengwa yebo izinkulungwane eziyishumi nane. Njengoba abathengi, kwaze kwaphela unyaka yokusetshenziswa Abekho iphutha kumatilasi. Ngakho-ke, umkhiqizo othola izikolo eziphezulu kakhulu.
Uma ukhathele ukulala i kumatilasi oludala Squeak ubusuku bonke, khona-ke vakashela esitolo "sarma", lapho ziyoyizwa umkhiqizo ephelele sokulala.
Ithebula ekhishini - kuba isikhungo. Yenza isinqumo esifanele!
Embhedeni kabili ngezandla zakhe: izici eziyinhloko
Ukukhetha udonga Modular for egumbini lokuphumula
Indlela ukukhetha ilungelo umntwana esihlalweni wamathambo
Drops e ukuvuvukala endlebeni: amagama kanye nezincomo. Indlebe sehla nge otitis abezindaba
Bathanda intombazane? Izinketho izipho ezinhle
"Strepsils" lisho ukuthini. Yokusetshenziswa
Mercedes W124 E500. Imininingwane kanye nokubuyekeza
Izingane kanye nabantu abadala abathanda epaki amanzi "Batumi"
Njengoba sigubha usuku ohulumeni basekhaya
Izikhungo Wezingane ukuzijabulisa Petersburg: ukubuyekezwa, izincazelo, uhlu kanye nokubuyekeza
Zezinwele Simple for girls nsuku enkulisa futhi esikoleni (ngezigaba ngezithombe) ukuze izinwele naphakathi
Subsystem ngoba ventfasadov: izingxenye kanye nezici